Museeks isingaremi Electron-yakavakirwa mumhanzi mutambi | Linux Vakapindwa muropa
Museeks isingaremi Electron-yakavakirwa mumhanzi mutambi
Museeks mutambi wemimhanzi yakawanda sosi yakavhurika iwe uri yakanyorwa muNode.js, Electron uye React.js. Iyo ine maviri mushandisi maficha, imwe mwenje uye imwe yakasviba. nerutsigiro rwe mp3, mp4, m4a, aac, wav, ogg uye 3gpp mafomati emafaira.
Museeks zvinotibvumidzawo kuti tiwedzere madingindira, gadzirisa playlists, mutsara mutsara, Shuffle, loop, playback kumhanya kudzora uye Kurara mode blocker.
1 Chii chitsva mune yazvino vhezheni yeMuseeks
2 Maitiro ekuisa Museeks paLinux?
3 Maitiro ekuisa Museeks paLinux kubva kunobva kodhi
3.1 Maitiro ekuisa iyo dhe museeks?
3.2 Maitiro ekuisa iyo mamuseum ye rpm?
3.3 Maitiro ekuisa museeks paArch Linux uye zvigadzirwa?
Chii chitsva mune yazvino vhezheni yeMuseeks
Museeks parizvino iri pane vhezheni 0.9.3 inova inogadziridza inounza yakawanda diki diki yekuvandudza:
Yakagadziriswa kusangana neMacOS
Kushandiswa kuri nani kweCPU zviwanikwa
Yetsika scroll scroll
Yakavandudzwa zvizvarwa zvemo
Yakagadziridzwa Electron, V8 uye Node.js
Maitiro ekuisa Museeks paLinux?
Kuisa Museeks paLinux, tinogona kushandisa nzira dzekumisikidza dzinopihwa nemutambi, yekutanga iri kuburikidza neAppImage faira kuti umise nenzira iyi unofanirwa kuita zvinotevera.
Isu tinofanirwa kuvhura terminal uye kurodha iyo vhezheni yakaratidzirwa kune yedu yekuvaka.
Ye 32-bit masisitimu
Ye 64-bit masisitimu
Chinhu chinotevera kupa mvumo yekuuraya iyo faira iyo yatinotora
chmod +x museeks.appimage
Pakupedzisira, isu tinongoisa iyo application ne:
Paunotanga iyo faira kekutanga, iwe unozobvunzwa kana iwe uchida kubatanidza chirongwa nehurongwa. Kana iwe ukasarudza Hungu, iyo program launcher ichawedzerwa kune yekushandisa menyu uye yekuisa mifananidzo.
Pane kupokana, kana tikasarudza kwete kuti tishandise Museeks, tinofanirwa kugara tichinyanya-pfaira iyo faira ratinotora.
Maitiro ekuisa Museeks paLinux kubva kunobva kodhi
Kuisa mutambi pano, isu tinofanirwa kurodha pasi kodhi yekodhi, tinozviita nemirairo inotevera:
Tisati tatanga iyo yekumisikidza maitiro, isu tinofanirwa kubvisa chero yapfuura kumisikidza yemutambi uyu, kune izvi isu tinoita inotevera mirairo:
sudo rm -Rf /opt/museeks*
sudo rm -Rf /usr/bin/museeks
sudo rm -Rf /usr/share/applications/museeks.desktop
Zvino isu tinongofanira kudaro unzip iyo faira rakadzingwa munzira inotevera:
sudo unzip /museeks.zip -d /opt/
Iye zvino isu tinongofanirwa kuendesa mafaira kune anotevera dhairekitori, sezvo zvichange zviri nani kuti uishande seizvi, unogona kusarudza kuidana zita:
sudo mv /opt/museeks-linux* /opt/museeks
Iye zvino tave kuzogadzira chinongedzo chinongedzo kubva kune bhanari:
sudo ln -sf /opt/museeks/museeks /usr/bin/museeks
Nhanho inotevera ichave yekugadzira nzira pfupi yekushandisa kuti tiite izvi pane terminal isu tinoita zvinotevera:
echo -e '[Desktop Entry]\_n Version=1.0\_n Name=Museeks\_n Exec=/opt/museeks/museeks\_n Icon=/opt/museeks/resources/app/src/images/logos/museeks.png\_n Type=Application\_n Categories=AudioVideo;Player;Audio;' | sudo tee /usr/share/applications/museeks.desktop
Nezve izvi isu tinokwanisa kutanga iyo application kubva kune iyo terminal nekungonyora museeks mune iyo terminal kana kana tichishuvira isu tinogona kufambisa iyo launcher kudesktop seinotevera
sudo chmod +x /usr/share/applications/museeks.desktop
cp /usr/share/applications/museeks.desktop  ~/Desktop
Pano ivo vanofanirwa kucherechedza, nekuti kana yako system iri muchiSpanish, kazhinji ako ega mafolda zvakare, saka unotsiva "Desktop" ne "Desktop".
Pakupedzisira zvakare Ivo vanotipa isu yekuisa mapakeji mu .deb uye .rpm fomati kuiswa muDebian, Ubuntu, Fedora, openSUSE nevamwe.
Maitiro ekuisa iyo dhe museeks?
Zvekuisa kwako isu tinongofanirwa kurodha pasi iyo deb faira, pakupera kwekurodha pasi isu tichavhura terminal, tinozviisa isu mune dhairekitori kwatino chengeta iyo yakadzingwa faira uye nekuita unotevera kuraira:
Isu tinogona zvakare kuita iyo yekuisa nerubatsiro rwepakeji yekumisikidza.
Maitiro ekuisa iyo mamuseum ye rpm?
Nenzira imwecheteyo yatakaisa iyo deb faira, zvinoshanda zvakafanana kune rpm chete kuti isu tinoshandura zvinotevera, pane terminal tinonyora:
sudo rpm -i museeks*.rpm
Maitiro ekuisa museeks paArch Linux uye zvigadzirwa?
Muchiitiko cheArch Linux uye zvigadzirwa zvayo iko kunyorera kunosanganisirwa mukati meyourt zvinyorwa yekumisikidza kwayo isu tinongofanirwa kuita unotevera kuraira:
Uye isu tinongofanirwa kuenderera neiyo yekuisa maitiro kubva kune iyo terminal.
Neichi tinogona kutanga kushandisa ichi chinoshamisa mutambi mune yedu system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Museeks isingaremi Electron-yakavakirwa mumhanzi mutambi
Kutaura nezve chishandiso chakavakirwa paElectron furemu uye panguva imwe chete ichiti icho chakareruka, hachienderane nemaonero angu. Erekitironi ine zvakawanda zvakanaka, asi kuvandudzwa kwehuremu maapplication hachisi chimwe chazvo.
Pindura kune Terminal
Ini ndinobvumirana zvizere, hazvina musoro kushandisa iro izwi: Clementine ari pa5.2Mb kurodha pasi, Deadbeef iri 7.7Mb, Audacius pazasi peizvozvo izvo. Pamwe izwi rekuenda ndi "minimalist" zvichireva chinongedzo
Pindura kuna 4fff616
Haisi mune yaourt repos, iri muAUR (Archinux User Repositories), yaourt ndeye maneja weAUR, asi unogona kushandisa vamwe mamaneja
Pindura kuna namkhai
nyatso kubvumirana nezvakataurwa kare. Ini ndinofunga kuti chikuva cheatomu chine zvakawanda zvakanaka kune mamwe marudzi emaapplication asi izvi handizvo
Stella muchinjikwa-chikuva uye yakavhurwa sosi Atari 2600 emulator
Maitiro ekuisa Wordpress paLinux?